Pitivi: onye editọ vidiyo na-abụghị linear ruru ụdị ọhụrụ ya 2020.09 | Site na Linux
Pitivi: onye na-abụghị linear video nchịkọta akụkọ ruru ya ọhụrụ mbipute 2020.09
Mgbe afọ abụọ nke mmepe, igba egbe di nke usoro edezi vidiyo na-enweghị usoro Afọ 2020.09, que na-enye ọrụ dịka nkwado maka ọnụọgụ a na-akparaghị ókè, ịzọpụta a zuru ezu akụkọ ihe mere eme nke arụmọrụ na ike na-aga azụ, na-egosipụta thumbnails na a usoro iheomume na nkwado maka ụdị vidiyo na arụmọrụ nhazi.
Onye nkwusa bu edere na Python site na iji GTK + (PyGTK), GES (GStreamer na-edezi Ọrụ) yana nwere ike ịrụ ọrụ na vidiyo niile na usoro ọdịyo nke GStreamer na-akwado, gụnyere MXF (Ihe eXchange Format). A na-ekesa koodu ahụ n'okpuru ikike LGPL.
Ọrụ ahụ jiri atụmatụ aha ọhụrụ maka nsogbu maka nọmba “year.month”. Mgbe mbipute 0.999, mbipute 1.0 na-atụghị anya ya na nke 2020.09 wepụtara.
Na mgbakwunye, agbanweela usoro mmepe: e mepụtala ngalaba abụọ: "kwụsie ike" iji mepụta nsụgharị kwụsiri ike yana "mmepe" ịnata ma nwalee ọrụ ọhụụ.
N'ime oge nkwụsi ike nke sitere na 2014, tupu ntọhapụ 1.0, ọ bụ naanị mgbanwe ndị dị oke mkpa ka a nabatara na isi akwụkwọ, mana e leghaara ọtụtụ ohere na-atọ ụtọ anya.
Ntọhapụ Pitivi 2020.09 gụnyere ọtụtụ ihe ọhụụ nke ụmụ akwụkwọ mepụtara site na mmemme Google Summer nke Usoro kemgbe 2017. A na-eji nyocha nke otu na nyocha ndị ọgbọ iji mee ka ihe ọhụụ ndị a kwụsie ike.
Ọbá akwụkwọ GStreamer na-edezi Ọrụ (GES) nke Pitivi na-atụgharị obi wee ruo nsụgharị 1.0.
1 Ozi kachasị nke Pitivi 2020.09
1.1 Etu esi etinye Pitivi na Linux?
Ozi kachasị nke Pitivi 2020.09
Na ụdị ọhụụ a usoro iji mejuputa ihu igwe maka ebumnuche dị iche iche, enwere ike iji ya rụọ ọrụ kama ịwepụta akpaaka. Ejiri ihu iche iche maka frei0r-filter-3-point-color-balance na nghọta nghọta.
Gbakwunyere a ihuenyo ọhụrụ na nnabata ngwa nnabata, nke dochiri nnata ozi ọma ma na-enye gị ohere ịwụli ozugbo na ọrụ ndị emepere n'oge na-adịbeghị anya.
Emegharịrị nhazi akwụkwọ. Agbakwunye ikike ịtọlite ​​mmetụta ndị a na-ejikarị eme ihe iji mee ka nhọrọ ha dị elu. Usoro nke ịgbakwunye mmetụta dị mfe. Agbakwunyere ikike iji rụọ ọrụ na ọtụtụ mmetụta n'otu oge.
N'ime mgbanwe ndị ọzọ na - apụta na ụdị ọhụụ a:
Ihe mgbakwunye mgbakwunye agbakwunyere ịgbatị ọrụ Pitivi.
Agbakwunyere ngwa mgbakwunye maka njikwa njikwa.
Agbakwunyere ike iji mepụta oge akwụ ụgwọ mgbe ị na-ebubata faịlụ XGES.
Nkwado agbakwunyere maka itinye aha mmado na usoro iheomume.
Edegharịrị ụlọ akwụkwọ mgbasa ozi, bụ ebe enwere ike iji echiche dị iche apụta.
Nyeghachi dialog reworked.
Nyeghachi mweghachi nke edezi ọnọdụ mgbe ịmaliteghachi ọrụ ahụ.
Gbakwunyere ngosi nke ebe nchekwa na onye nlele.
Mmekọrịta clip dị mfe.
Agbakwunyere ikike imechi ogwe dum ma zoo akwa dum.
A na-enye nduzi na-emekọrịta ihe iji mata usoro ihe omume ahụ maka ndị mbido.
Etu esi etinye Pitivi na Linux?
Ndị mmepe Pitivi na-ekesa ngwa ha site na ngwugwu Flatpak. Yabụ ngwa gị nwere ike itinye ebe niile na nkesa Linux ọ bụla na usoro a.
Otherzọ nke ọzọ bụ nbudata koodu isi nke ngwa ahụ, na-achịkọta ya ma wụnye mgbakwunye nke a na sistemụ.
Iji zere nke a, anyị ga-ahọrọ maka ntinye site na nchịkọta Flatpak, Naanị gị ịnwe nkwado iji nwee ike ịwụnye ụdị ngwa a na sistemụ gị.
Emechaala nke a na ọnụ anyị ga-pịnye iwu na-esonụ:
Na njikere na anyị ga-arụnyere video nchịkọta akụkọ na anyị usoro.
Ọ bụrụ na ịchọtaghị ngwa ngwa n'ime menu nke sistemụ anyị, anyị nwere ike ịmalite ngwa ahụ site na njedebe site na ịme iwu ndị a:
Ugbu a Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ụdị beta nke ngwa ahụ (ọ bụ 1.0 ugbu a), ịnwere ike ịnweta ya site na ịme iwu ndị a:
Na mgbakwunye, na anyị chọrọ ịwụnye nkwado ọzọ na ụdị nke a:
Ma ọ bụ ọ bụla ikpe ha mkpa imelite ngwa ka a na-adịbeghị anya anụ version ha kwesịrị naanị igbu:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Pitivi: onye na-abụghị linear video nchịkọta akụkọ ruru ya ọhụrụ mbipute 2020.09
Sequoia, ọbá akwụkwọ na-etinye ụkpụrụ OpenPGP n'ọrụ
CrossOver 20.0 bịarutere dabere na Wine 5, nkwado maka Chrome OS, nkwado dị ukwuu maka Linux na ndị ọzọ